Nhau - 2020-2026 Global Mica Sheet Musika Kunze uye Kunze Zviitiko, Zvishandiso, Kukura Maitiro uye Kufanotaura.
Rondedzero yazvino yekutsvagisa yakaburitswa neMarketsandResearch.biz inofungidzira iyo yepasi rose mica musika nemugadziri, dunhu, mhando uye mashandisiro mu2020.Ndiyo ongororo yazvino kusvika 2026 uye inopa mukana kune ese aripo emusika ruzivo uye mikana mumusika wepasi rose. Kutungamira kwekusimudzira. Chirevo chinotarisa kuongororwa kwenjodzi nenzvimbo yayo inotungamira pasi pekutsigirwa kwehunyanzvi uye nehunyanzvi kuita sarudzo. Chirevo chinopa ruzivo nezve zvinoitika musika uye zviitiko, madhiraivha, uye kugona. Uku kutsvagisa kunovavarira kuona saizi yemusika wezvikamu zvakasiyana zvemusika uye nyika / matunhu mumakore mashoma apfuura uye kufungidzira kukosha kwemusika mumakore mashanu anotevera. Zvinhu zvakakosha zvakapfupikiswa mumushumo zvinosanganisira mugove wemusika, saizi yemusika, zvinhu zvekutyaira uye zvipingamupinyi, uye fungidziro kusvika 2026. Chirevo chinopa ruzivo rwekutanga pamakwikwi uye kumisikidzwa mumusika, pamwe nevatambi vakuru.
Zvinoenderana nerudzi, musika wepasirese wakakamurwa kuita mica yechisikigo uye synthetic mica. Zvinoenderana nechishandiswa, musika unogona kuwedzera kugoverwa muindasitiri yekuvaka, indasitiri yekudzivirira moto, indasitiri yemapepa, nezvimwewo. Ipapo, kuongororwa kwedunhu hakuitwe kumatunhu makuru, asiwo kunosanganisira kuongororwa kwakazara kwenyika dzese dzakasimukira uye dzichiri kusimukira. Chirevo chinopa yakazara yepasi rose Sheet Mica musika ongororo zvichibva pazvikamu zvakakosha zvemusika (senge zvigadzirwa mhando, kunyorera, makambani akakosha nenzvimbo dzakakosha, vashandisi vekupedzisira) panguva yekufungidzira kubva 2020 kusvika 2026. Izvi zvikamu zvemusika nezvikamu zvidiki zvave zvakanyorwa. Maindasitiri nyanzvi, nyanzvi uye vamiriri vekambani vanozoongorora iyo data kubva kune aya zvikamu zvemusika uye zvikamu zvemusika mumakore mashoma apfuura.
Ongorora: Vaongorori vedu vanoongorora mamiriro epasirese uye vanotsanangura kuti musika unounza mikana mikuru yemubhadharo wevagadziri mushure medambudziko re COVID-19. Chirevo ichi chine tarisiro yekuenderera mberi nekutsanangura mamiriro azvino mamiriro, kudzikira kwehupfumi pamwe nekukanganiswa kwe COVID-19 paindasitiri yese.
Ongororo yekukura kwenharaunda: Dzese dzakakosha nzvimbo nenyika dzakakurukurwa mushumo wepasi rose Sheet Mica. Bvunzo dzemuno dzichabatsira vanotora chikamu kutora mukana wemusika wemuno usina kubikwa, kugadzirira nzira dzakajeka dzepakananga nzvimbo, uye kuona kukura kwemusika wega wega wedunhu. Chirevo chinoongorora nyika dzinotungamira nemikana, pamwe nemhando dzekushambadzira dzematunhu uye ongororo yekutengesa.
Chirevo chinoratidza kuongororwa kwakapunzika nenharaunda, ichifukidza matunhu anotevera: North America (United States, Canada, neMexico), Europe (Germany, France, United Kingdom, Russia, uye Italy), Asia Pacific (China, Japan, Korea , India, uye Southeast Asia), South America America (Brazil, Argentina, Colombia, nezvimwewo), Middle East ne Africa (Saudi Arabia, UAE, Egypt, Nigeria neSouth Africa)